Iyo itsva vhezheni yeBleachBit 2.2 inosvika, iyo CCleaner yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeBleachBit 2.2 inosvika, iyo CCleaner yeLinux
BleachBit ndeyekusarudzika rakanakisa dhisiki yekuchenesa zvinoshandiswa (senge makuki, zvakapatsanurwa, nezvimwewo) uye kune imwe nhanho yekudzivirira uye kugadzirisa kwehukama.
Iyi software Inowanikwa kubvira 2008 pakutanga pasi peGNU / Linux, ikozvino iri multiplatform: Windows, asiwo Blackberry uye macOS (raira mutsara).
Mazhinji mapurogiramu esoftware anotsigira kuchenesa faira, rimwe nerimwe riine zviyo zvaro zvejecha (mafaera enguva pfupi, cache, matanda, makuki, kuomesa / kukanganisa kudzikamisa zvakadzika SQLite dhatabhesi, nezvimwewo).
BleachBit inowanzo fananidzwa neCCleaner paWindows. Nekudaro, iyo yekupedzisira ndeyekuridzi, uye maitiro emuparidzi wayo achangobva kusiya chimwe chinhu chinodiwa (pop-ups, kuiswa kwezvirongwa zvisingadiwe).
Kunyangwe zvirongwa zviviri izvi zvine maitiro akafanana, ndinogona kutsunga kutaura kuti BleachBit inogona kuzviita futi kana kunyangwe zvirinani kunyangwe paine chinongedzo chinogona kutsanangurwa sekusanyatsoyevedza (uye zvichiri nyore kushandisa IMHO).
Kuchenesa kunogona kuve nyore, asi zvakare kwakachengeteka (kunyorazve kunyanya) kudzivirira kuenderera mberi kupora. Unogona zvakare kuzadza nzvimbo yemahara kuti uve nechokwadi chekuti mafaera akamboparadzwa haawanikwe.
1 Nezve itsva vhezheni 2.2
2 Maitiro ekuisa BleachBit 2.2?
Nezve itsva vhezheni 2.2
Mamwe mazuva apfuura vhezheni itsva yeichi chishandiso yakaburitswa iyo inouya nezvinhu zvitsva mukuwedzera kune echinyakare bug fixes.
Iyi yekuvandudza inosanganisira nyowani yefaira yekubvisa ficha, inovandudza bhurawuza dhata kubvisa, inowedzera rutsigiro rwezvirongwa zvitsva, inogadziridza zvimwe maficha, uye zvakare ine zvakawanda zvemukati zvinowedzera.
Pakati pezvakakurumbira zvitsva tinogona kuwana GTK + Shanduko kubva pavhezheni 2 kusvika ku3, uyezve kubva paPython 2.7 kuenda kuPython 3.
Iyi vhezheni 2.2, yakaburitswa munaKurume wadarika, inounza zvimwe zvezvinhu zvitsva zvinotevera. Kunyanya kukosha kunatsiridza maererano:
Yakawedzerwa basa idzva kuFaira menyu kuti ubvise zvachose mafaera akopisirwa kubhodhi clipboard.
Ndokunge, mushandisi anogona kuteedzera mafaera kune anoshanda system, mushure mezvo, anoshandisa basa racho kuadzima zvachose. Izvi zvinoshanda chete kune vashandisi vane maneja kodzero.
Inoshamisa inovandudza kuchenesa kwemabhurawuza e data Firefox, Google Chrome uye mamwe mabhurawuza Chromium yakavakirwa. Pakati pezvimwe zvinhu, yakawedzera tsigiro yeGoogle Chrome dhata yekubvumirana yekuchenesa.
Yakagadziridzwa Opera browser kuchenesa.
Wakawedzera nyowani yekuraira mutsara rairo: chenesa nzvimbo yemahara yekuchenesa diski ("Bvisa nzvimbo yemahara" basa)
Yakagadziridzwa kumhanyisa kumhanya kwechirongwa. Pane mamwe makomputa, iko kumhanyisa kuwedzera kunogona kuve kwakakosha.
Yakagadziridzwa chirongwa icon yakawedzerwa kuitira zvirinani kutarisisa pakakwirira resolution.
Wakawedzera rutsigiro rweWallfox data yekuchenesa
Yakagadziridzwa rutsigiro rweaMule data yekuchenesa chirongwa.
Maitiro ekuisa BleachBit 2.2?
Kune avo vanofarira kuisa iyi nyowani vhezheni yeBleachBit 2.2 pane yavo Linux kugovera. Ivo vanozokwanisa kuzviita nekutevera mirairo yatinogovana newe pazasi.
Ivo avo vanoshandisa chero vhezheni yeUbuntu nerutsigiro, vanofanirwa kurodha pasi yeanotevera mapakeji zvinoenderana neshanduro yavari kushandisa.
Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish) iyo pasuru inofanira kurodha pasi izvi.
Para Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) pasuru yavari kuenda kunotora izvi.
Ubuntu Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) iyo pasuru yeshanduro yako izvi.
Para Ubuntu 14.04 LTS (Yakavimbika Tahr) pasuru yavari kuenda kunotora izvi.
Kune avo vari vashandisi veLinux Mint, ivo vanofanirwa kurodha pasi pasuru iyi.
Panguva yeavo vari Vashandisi veDebian 9 kana chero imwe distro inoenderana neizvi, iro pasuru yako system izvi.
Pakupedzisira, Ivo vanoisa iyo inotorwa pasuru neyavanofarira package maneja kana kubva kune iyo terminal nekutaipa unotevera kuraira:
sudo dpkg -i bleachbit_2.2*.deb
Zvino kune avo vari Vashandisi veS OpenS iyo pasuru ye distro yako izvi.
Users of Fedora 28 kana kupfuura, pasuru iyi ndiyo imwe unofanira kurodha pasi.
Kune avo vanoshandisa masendi 7 pasuru iyi ichaita kurodha.
Uye kuisa ivo vanogona kuzviita kubva kune terminal ne:
sudo rpm -i bleachbit_2.2*.rpm
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeBleachBit 2.2 inosvika, iyo CCleaner yeLinux
Mubvunzo: kana ini ndaisa iyo ndinoigadzirisa sei kana kuti yatove mumabhuku?
Linux AV Linux 2019.4.10 inosvika, iyo distro yekugadzira odhiyo uye vhidhiyo